Huawei Watch 2, hanazava izany aminao izahay ao anatin'ny 3 minitra | Androidsis
Huawei Watch 2, hanazava izany aminao izahay ao anatin'ny 3 minitra
Androany izahay mitondra anao ny horonan-tsary iray izay ampianaran'i Juan Cabrera, talen'ny vokatra ao Huawei ny tsiambaratelo rehetra an'ny Huawei Watch 2 ao anatin'ny telo minitra fotsiny. Araka ny ho hitanao, ny hevi-dehibe an'i Huawei dia ny famantaranandrony vaovao dia fitaovana mahaleo tena tanteraka avy amin'ny telefaona finday.
Ary ilaina ny mahatadidy fa misy kinova roa amin'ny Huawei Watch 2, ny Classic sy ny Sport ary amin'ny tranga roa dia misy kinova LTE noho izany tsy mila finday avo lenta hampiasa an'ity smartwatch mampino ity isika.
Miaraka amin'ny Huawei Watch 2 afaka mandeha mihazakazaka ianao nefa tsy mitondra ny telefaoninao
Ho an'izany, nomen'ilay mpanamboatra ny Huawei Watch 2 misy slot misy eo amin'ny lafiny iray amin'ny vatan'ny famantaranandro hahafahantsika mampiditra karatra SIM nano. Vantany vao vita izany ary raisina an-tsaina izany ny Watch 2 dia misy mikrô, azontsika atao ny mampiasa ny famantaranandro samirery, tsy mila mampifandray azy amin'ny finday avo lenta.
Ny antsipiriany iray hafa tena mahaliana dia, na dia manana koa ny Huawei Watch 2 mpandahateny mba hahafahantsika mamaly antso tsy misy olana, Ny fitaovana koa dia manana fifandraisana Bluetooth sy NFC hahafahantsika mampifandray ireo fitaovana mifanentana.
Amin'izany fomba izany, ohatra, azontsika atao ny mampifandray ny headphones tsy misy tariby mba hihainoana mozika mandritra ny famantaranandro (tadidio fa manana izany izy 4 GB fitehirizana anatiny). Ankoatr'izay, ny zava-misy fa ny tsipika Huawei Watch 2 dia manana sensor hafa izay handrefesana ny tahan'ny fo, ny halaviran-dàlana, ny hafainganam-pandeha ary ny angona hafa izay hahafaly ireo mpihazakazaka faran'izay tsara, ataovy io safidy io indrindra amin'ny safidy mety indrindra raha tadiavinao famantaranandro mifantoka amin'ny fanaovana fanatanjahan-tena. Bebe kokoa raha raisintsika fa ny Huawei Watch 2 dia mahatohitra ny vovoka sy ny rano noho ny fanamarinana IP68, ankoatry ny fiaraha-miasa amin'ny Android Wear 2 ka izay fampiharana tiana hampiasaina dia hifanaraka.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » Finday » Huawei » Huawei Watch 2, hanazava izany aminao izahay ao anatin'ny 3 minitra
IZAY LAZAIN'NY 1% IHANY NO MARINA
Valiny amin'i ANTONIO
Salama, maninona aho no tsy mahazo ny rindranasa rehetra ananako an-telefaona amin'ny famantaranandro huawei watch2 na ny whatsapp? Tonga androany aho ary tsy hitako izay antony, azafady mba hazavao amiko ny olona, ​​misaotra betsaka.
Mamaly an'i jose angel
Capcom's 1942, kilasika arcade tonga amin'ny Android
Huawei dia hiloka amin'ny Internet amin'ny zavatra ho an'ny fitaovany